काठमाडौं । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा उनको नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुले आ-आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
आज सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग श्रीमती राधिको शाक्यसहितको गरेर ७७ लाख रुपैयाँ बैंक ब्यालेन्स भएको उल्लेख छ। प्रम ओलीको नाम एभरेस्ट बैंकमा जम्मा ४२ लाख रकम रहेको र पत्नी राधिका शाक्यको नाममा माछापुच्छ्रे बैंक, त्यस्तै प्रभु बैंक राष्ट्रिय पत्रमा गरी जम्मा ३५ लाख भएको विवरणमा जनाईएको छ।
ओली पत्नी राधिका नेपाल राष्ट्र बैंककी पूर्व प्रथम श्रेणीकी कर्मचारी समेत हुन् । त्यस्तै प्रम पत्नी राधिकाकै नाममा भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका २ मा साढे एक रोपनी जग्गामा बनेको तीन तल्ले दुईबटा घर रहेको पनि सम्पति विवरणमा उल्लेख छ।
शाक्यकै नाममा झापामा पनि १० कठ्ठा जमिन रहेको उल्लेख गरिएको छ। जुन स्वआर्जनबाट सम्पतिबाट प्राप्त भएको उल्लेख छ। ओलीले सार्वजनिक गरेको सम्पति विवरणमा सुनका गरगहना १७ तोला रहेको बताईएको छ ।
प्रकाशित : बुधबार, जेठ ०९, २०७५१५:०९
बनेपाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस भक्तपुरमा पल्टियो , ९ जना घाइते !
रूख ढाल्दा घरको आँगनमा बसेकी शाहको मृत्यु
चलचित्र ‘रोमियो एण्ड मुना’ को गीत सार्वजनिक, यस्तो बन्यो भिडियो!
भोलि देशव्यापी शैक्षिक संस्था बन्द आह्वान !